SIDA LOO QALAJIYO ISTEROBERI QORRAXDA: TALOOYIN IYO TABAHA - WIXII MARTIDA
Miro qalalan waa hab fiican oo lagu ilaalin karo. dhadhanka iyo guryaha caafimaadkaba wakhti dheer, tanina si gaar ah ayey nagu filan tahay - marar dhaadheer iyo qaboobaha ma aha wax adag in lagu caajiyo midhaha xagaaga.
Waxaad sameyn kartaa wax-qabad cajiib ah, gooyo iyo fusoyin laga helo miraha qalalan, ku dar suuqyo kala duwan, tusaale ahaan, naaneyska, dabcan, isticmaal wax walba oo sidan oo kale ah.
Doorasho weyn for goosashada waa pear ah.
Ma aha oo kaliya tafaasiil, laakiin sidoo kale hodan ku ah fitamiinada iyo walxaha raadraaca miro in loo isticmaalo daawada dabiiciga ah ee xanuunada habdhiska difaaca, wadnaha iyo beeryarada.
Pear waa ka duwan yahay fructose sareSidaa darteed, waa wax aad u fiican dadka qaba cudurka macaanka, iyo sidoo kale kuwa doonaya in ay soodhaha ku beddelaan cuntada. Si kastaba ha noqotee, laguma talin in aad cuntid pears on calool madhan.
Kiimiko aan ku habooneyn kaydinta Maqalka ama guriga cusub shuruudaha qaarkood waa la qalajin karaa ama la qaboojin karaa, ama la qalajiyey, sida kiiskeena.
Sida loo qalajiyo isteroberi qorraxda si sax ah? Pear-self-breaking pears ee hawada u furan ma aha dhan oo adag.
Dadka qaarkood waxay jecel yihiin in ay ku engegaan isteroberka foornada - waa mid la gaari karo oo dhakhso badan, laakiin qallajinta qorraxda ayaa loo tixgeliyaa dabiici ah iyo, natiijada, ugu wanaagsan.
Haddii aad fursad u leedahay, waxaad xor u tahay inaad doorato ikhtiyaarka labaad. Aan ku bilowno sharciyada aasaasiga ah ee aad mar kasta xasuusato.
Si taxadar leh tiri xilliga cimilada qalajinta - dhawr maalmood waa inaan la fileynin roobab. Miraha loogu talagalay baahida qalajinta si taxadar leh u dooro - Waxay u fiicantahay inay ka mid yihiin darajada saxda ah, heerka bislaanshaha, casriga iyo lahaansho muuqaal ah.
Sure ilaa gooyso miro - sidaas awgeed nidaamka qalajinta ayaa si siman oo degdeg ah u dhacaya dhammaan qaybaha ilmaha caloosha ku jira. Marka qalajinta hawada, waa muhiim inaad ilaaliso miro ka cayayaanka. Shaqadani waxay si fiican u shaqeyneysaa faashad - ku dabool maro marada isbeddela, iyo dhexda ma awoodi doonaan inay taabtaan.
Inkastoo muddada dheer ee qalajinta qorraxda, waa in aynaan illoobin waqti ka waqti jeedi oo isku dar miraha
Ma aha midh kasta oo ku haboon in lagu qalajiyo isteroberi qorraxda. Aynu bilowno adoo dooranaya kala duwanaanta saxda ah. Himiladayada - marka la eego dhexdhexaadinta qalalan (iyada oo aan qoyaan badan) iyo cufan, ma sameynaayo iyo ma'ahan badan oo leh caraf udgoon iyo dhadhan. Fasalada: Bergamot, Lemon, Forest Beauty, Talgar Beauty, Victoria, iwm.
Waxaan bixineynaa kaliya kaliya isha iyo bisad cusub. Badan Iyadoo aan loo baahnayn - waxay mar hore bilaabeen in ay kalluumaystaan, natiijada qalajinta waxay kugu kalsoon tahay adiga.
Kalluunka ugu horeeya waa lagama maarmaan mayo si fiican. Jarida maqaarka looma baahna, lakiin tani waa la sameyn karaa haddii ay adag tahay. Miraha waxaa lagu jarjarey jaleeco ama gogo '- si aad u dhadhamiso, miraha ayaa laga saaray. Xitaa isteroberi yar ayaa la gari karaa si buuxda.
Mararka qaarkood, ka hor inta aadan qalajin, marka lagu daro diyaarinta asaasiga ah, hababka dheeraadka ah tayo badan oo tayo badan leh.
Si tan loo sameeyo, isteroberi la dhaqay ayaa la dhigayaa biyo karkaraya oo la kariyey wax ka badan 15 daqiiqo, waxaad kaloo ku dari kartaa biyaha sonkorta.
Ka dibna midhaha ayaa laga saaraa biyaha karkaraya, loo oggol yahay inay qaboojiso, kadibna kaliya waa la jaraa.
Doorashada meesha saxda ah ee lagu qalajiyo waa badhkii dagaalka. Xaaladaha ugu muhiimsan waa:
helitaanka qorraxda tooska ah;
helitaan hawo cusub;
awooda lagu raaco midhaha.
Pear jarjaran oo la dhigay gooyay on dushiisa, daboolo maro faashad si looga ilaaliyo cayayaanka oo ka baxo 2-4 maalmood ilaa diyaar, aragti ahaan la qiimeeyo.
Habsocodka, waa inaadan ilaawin inaad mararka qaar jajabiso. Marka qorraxdu qallajiso, miro qaadeen hooskahalkaas oo ugu dambeyntii la qalajiyey ilaa laba maalmood.
Haddii muddo ah hawada qorraxdu is bedesho buuqwaxaa fiican inaad si ku meel gaar ah u guurto miro hoosta, laakiin haddii roobku xumaan doono dhamaan shaqadaada.
Sida aad u aragto, ma aha wax adag in la kariyo miraha la qalajiyey iyadoon loo isticmaalin foornada beertaada ama dalka, alaab wanaagsantaas oo aad ku raaxeysan karto sanadka oo dhan.
Hooyo qibrad leh ayaa kula wadaagi doonta sida loo yeelayo isugudbada balakoonka adiga oo ku jira fiidiyowgaan: